Guinness World Record nke kacha agba agba na Baros Maldives
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Guinness World Record nke kacha agba agba na Baros Maldives
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Maldives na -agbasa • News • Resorts • Egwuregwu • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Na Tuesday, October 1, Baros maldives rụrụ ọrụ na mmekorita ya na Maldivian Ministry of Tourism iji mebie Guinness World Record maka ọnụ ọgụgụ kachasị ukwuu nke ndị nweere onwe ha ka ha wee banye na mmiri n'otu oge nwere ihe ịtụnanya 523. Ihe omume ahụ, akpọrọ Neyvaa: A Guinness World Records, gara nke ọma karịa ihe ndekọ nke ugbu a nke mmadụ 280 nke Torri del Benaco jidere na Verona 2009.
N'ịbụ ndị a họọrọ maka ugwu ụlọ ya pụtara ìhè na lagoon na-acha ọcha turquoise, Baros nabatara mbọ a na-agbaji ndekọ ahụ n'ememe ụbọchị njem nlegharị anya nke ụwa 2019. N'ime ndị bịara ya bụ Onye isi ala nke Maldives, Maazị Ibrahim Solih, na onye mmeri New-Zealand bụ onye mmeri na-akwụ ụgwọ n'efu Trubridge.
N'iburu idebe mma nke Baros, e guzobere nkwado nkwado coral na 2009 ebe ndị ọbịa nwere ike ịkwado iberibe coral. A na-ebugharị mpekere ndị a na nhazi ahaziri iche ebe ndị ga-enweta ihe oyiyi kwa ọnwa isii maka afọ abụọ nke uto coral. Roslọ Ọrụ Baros Marine malitere ịkọ ahịhịa coral ndị a n'ime mbọ iji kwado ịdị mkpa nke ụlọ Baros ma kwalite uto ya.
Site na nnwale ihe ndekọ ụwa a, Baros na-eme ka ọkwá ya dị elu dị ka onye ọsụ ụzọ na ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Maldivian na onye ndu na nchekwa nchekwa ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ.
Baros Maldives bụ ụlọ nkwari akụ, agwaetiti na-ekpo ọkụ nke 75 mmiri na oke osimiri na mpaghara osimiri na-acha ọcha na aja ọcha aja nke edobere na lagoon turquoise, naanị nkeji 25 site n'ụgbọ mmiri si Maldives International Airport.